သင့်ဖုန်းမှ INSTAGRAM ကိုမှဓာတ်ပုံကိုထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို - ဖုန်းကို - 2019
ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဖုန်းကို client application ကို Instagram ကိုအပေါ်ကို install သူကိုအတွေ့အကြုံသုံးစွဲသူများ၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေအများကြီးမေးခဲ့တယ်။ သူတို့ထဲကတဦးတည်းတွင်, အမည်ရ, သင့်ဖုန်းမှဓာတ်ပုံကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လို, ငါတို့ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာ reply ပါလိမ့်မယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ Instagram ကို install လုပ်နည်း
Instagram ကိုသာ iPhone ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲမူလကဒီဇိုင်းနှင့် iOS များအတွက်သီးသန့်အဆင်ပြေအောင်, ဒါမှမဟုတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အချို့အချိန်ပြီးနောက်ကရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်နှင့်ကို Google Play Store မှသင့်လျော်သော application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သည့်အန်းဒရွိုက်နှင့်အတူမိုဘိုင်းဖုန်းများပိုင်ရှင်တွေ။ Next ကိုကျနော်တို့ကဓာတ်ပုံ post ကိုဘယ်လိုရှင်းပြပါ။
Option ကို 1: အဆိုပါချောပုံရိပ်
သငျသညျ Instagram ကိုအတွက်ထုတ်ဝေဖို့အစီအစဉ်ရှိပါကမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိပြီးသားပုံမရရှိနိုင်ပါသည်အောက်ပါအချက်များကိုလုပ်ဆောင်
သေးငယ်တဲ့အပေါငျးလက်ခဏာတစ်စတုရန်းဝတ်ထား - Instagram ကိုသွားလာမှု bar ပေါ်တွင်ဗဟို button ကို click, running ။
ပွင့်လင်းတဲ့ပြခန်းရုပ်ပုံသို့မဟုတ်ပုံရိပ်၌သင်တို့ကိုထုတ်ဝေရန်နှင့်ရွေးဖို့ပေါ်မှာ tapnite ချင်ရှာဖွေပါ။
မှတ်ချက်: လိုချင်သောပုံတွင်မပါလျှင် "ပြခန်း"နှင့်သင့် device ကိုအပေါ်ကိုအခြား folder ထဲမှာ, အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်တွင် drop-down list ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်လိုချင်သောတည်နေရာကိုရွေးပါ။
သငျသညျလိုလျှင်ပုံသဏ်ဌာနျ (စတုရန်း) အရေဖျားလှီးခြင်း, တစ်ခုလုံးရဲ့ width ကိုဖော်ပြပေးမခံခဲ့ရ, (1) ခလုတ်ကိုအောက်ပါပုံရိပ်ထဲမှာမှတ်သားပေါ်တွင်နှိပ်ပါ, အဲဒီနောက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက် "Next ကို" (2).
(သင့်ဓါတ်ပုံကိုများအတွက်သင့်လျော်သော filter ကို Select လုပ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်ပုံသေတန်ဖိုးကိုသုံးပါ"Normal" ကို) ။ tapom tab ကို Switch "Edit ကို"သငျသညျအနာဂတျထုတ်ဝေတစ်ခုခုကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်။
တကယ်တော့ editing tools များ၏အရေအတွက်သည်အောက်ပါ tools များပါဝင်သည်:
စနစ်တကျစာနယ်ဇင်း, image ကိုလုပ်ငန်းများ၌ "Next ကို"။ ရွေးချယ်စရာထုတ်ဝေရန်၏ဖော်ပြချက်မှ add လူတွေအမှတ်အသား၏လျှပ်တစ်ပြက်ခဲ့သည့်အတွက်တည်နေရာတစ်ခုသတ်မှတ်။
ထို့အပြင်သင် Instagram ကိုအတွက်သင့်အကောင့်မှ pre-ချည်ထားရန်လိုအပ်သည်အခြားလူမှုကွန်ယက်ရန် post ကိုပေးပို့ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်ပို့စ်လက်စသတ်သောအခါ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Share" ဒေါင်းလုဒ်ပြီးပြည့်စုံသည်အထိနှင့်စောင့်ပါ။
Instagram ကိုဓါတ်ပုံထဲမှာ Published သင့်ရဲ့ feed ကိုနှင့်သင်ကကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီကအဆင်သင့်ဖိုင်ကိုပြီးသား Android ကိုနှင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာတည်ရှိနေလျှင်, ဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ် Instagram ကိုအခြားရုပ်ပုံကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူသည်။ သငျသညျအပလီကေးအင်တာဖေ့စကနေတဆင့်အောင်ပြီးနောက်ရုပ်ပုံချင်လျှင်, သင်ကွဲပြားခြားနားအနည်းငယ်ပြုမူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Option ကို 2: သင့်ကင်မရာကနေနယူးဓာတ်ပုံများ
အတော်များများကအသုံးပြုသူများသည်သီးခြားနောက်ဆက်တွဲထဲမှာဓါတ်ပုံကိုမယူကြိုက်တတ်တဲ့ "ကင်မရာ"မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပေမယ့် Instagram ကိုအတွက် embedded တစ်ခု analogue မှတဆင့်။ ဒီချဉ်းကပ်မှု၏အားသာချက်များကိုယင်း၏အဆင်ပြေစေရန်, အကောင်အထည်ဖော်မှု၏မြန်နှုန်းအပေါင်းတို့နှင့်လိုအပ်သောလုပ်ရပ်များ, တကယ်တော့, တစ်နေရာတည်းတွင်ထွက်သယ်ဆောင်သော။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုများမှာ
အမှု၌ရှိသကဲ့သို့, သစ်တစ်ခုထုတ်ဝေကိုဖန်တီးရန်စတင်အထက်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်တူရိယာ panel ကိုခလုတ်များအတွက် tapnite ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "ဓာတ်ပုံ".
interface ကိုသငျသညျရှေ့နှင့်ပြင်ပအကြားအကူးအပြောင်း, အဖြစ် flash ကို enable သို့မဟုတ် disable နိုင်ပါတယ်ရှိရာ built-in ကင်မရာ Instagram ကို, ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးလျှပ်တစ်ပြက်ကိုဖန်တီးရန်အဖြူရောင်နောက်ခံမီးခိုးရောင်စက်ဝိုင်းပေါ်မှပုံရိပ်ပေါ် click လုပ်, သင်ယူချင်သောအရာကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
, အမရရှိနိုင် photo filters များထဲမှလျှောက်ထားတည်းဖြတ်ပြုပါ, အဲဒီနောက်ကို click လုပ်တောင်းဆိုမှုမှာ "Next ကို".
သငျသညျ, သူမ၏ဖော်ပြချက်မှ add ပစ်ခတ်မှုရာအရပျထဲဝငျ, လူတွေအထိမ်းအမှတ်နှင့်အခြားကွန်ယက်များသို့သည်သူ၏ post ကို rassharte ကလိုအပ်သောထင်လျှင်စာမျက်နှာတွင်, သစ်တစ်ခုထုတ်ဝေဖန်တီးရန်။ မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူပြီးဆုံးသည့်အခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Share".
တိုတောင်းတဲ့ Boot တက်ပြီးနောက်ဖန်တီးနှင့်သင့်ဓါတ်ပုံကို Instagram ကိုထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သူမသည်ရုပ်ရှင်နှင့်သင်ကကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။
ထို့ကြောင့်လျှောက်လွှာ interface ကိုစွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲ, သင်သင့်လျော်သောလျှပ်တစ်ပြက်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နှင့် built-in filter များနှင့် editing tools ကနေတဆင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, ပြီးတော့သင့်ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်ထုတ်ဝေရန်။
option 3: Carousel (တော်တော်များများဓာတ်ပုံများကို)
မကြာသေးမီကသူတို့ရဲ့ Instagram ကိုအသုံးပြုသူန့်သတ်ချက်မှဖယ်ရှားပစ် "တဦးတည်းရုပ်ပုံလွှာ - ။ တဦးတည်းထုတ်ဝေ" ယခုပို့စ်တွင်တက်ဆယ်ဓာတ်ပုံများကိုဆံ့နိုငျသညျ, အလွန်တူညီ function ကိုခေါ်တော်မူသည်ကို "Carousel"။ ဘယ်လိုသူမ၏ "စီး" ကိုဖော်ပြပါ။
လျှောက်လွှာ၏အဓိကစာမျက်နှာ (တိပ်စာပမြေား) အသစ်တခုစံချိန် add နှင့် tab ကိုသှားဖို့ tapnite ခလုတ်ကိုတွင် "ပြခန်း"ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခံရဖို့မပါရှိဘူးဆိုရင်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အကွိမျမြားစှာကို Select လုပ်ပါ"
မျက်နှာပြင်အနိမ့်ဧရိယာထဲမှာပုံရိပ်တွေများ၏စာရင်းပြသထားသကဲ့သို့, (မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ tapom) ရှာဖွေမီးမောင်းထိုးပြ, တဦးတည်းပို့စ်တွင်ထုတ်ဝေချင်တဲ့သူတွေကို။
မှတ်ချက်: လိုအပ်သောဖိုင်များကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား folder ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်တွင် drop-down menu ကနေတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
လိုအပ်သောရိုက်ချက်များသတိပြုသူတို့ထဲသို့ကျသေချာအောင် "Carousel"ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
လိုအပ်လျှင်, သင်၏ပုံရိပ်တွေမှ Filter ကို Apply, ကိုနှိပ်ပါ "Next ကို".
မှတ်ချက်: အဆိုပါသိသာ, ယုတ္တိအကြောင်းပြချက်အဆိုအရ, Instagram ကိုမျိုးစုံဓါတ်ပုံတည်းဖြတ်ဘို့ခွင့်ပြုမထားဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့တစ်ဦးစီတစ်မူထူးခြားသော filter ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ထုတ်ဝေလက်မှတ်, တည်နေရာနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းခြင်း, သို့မဟုတ်ဤအခွင့်အလမ်းကိုလျစ်လျူရှု, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Share".
တိုတောင်းတဲ့ Boot တက်ပြီးနောက် "Carousel" ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခံရဖို့ဓါတ်ပုံများ၏သင်တို့ကိုရွေးကောက်သပါပြီ။ သူတို့ကိုကြည့်ရှုရန်, ရိုးရိုး (အလျားလိုက်) မျက်နှာပြင်အနှံ့ကသင်၏လက်ညှိုးကိုပွတ်ဆွဲပါ။
iOS ကို-based အပေါ် running မိုဘိုင်းဖုန်းများပိုင်ရှင်များကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသုံးရွေးချယ်စရာတွေထဲကရွေးချယ်ရာတွင်, Instagram ကိုအတွက်သင်၏ဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်အခြားအဆင်သင့်လုပ်ပုံရိပ်တွေထည့်နိုင်သည်။ ဒါကကွာခြားချက် operating system မြား၏ပိုင်ထိုက်သောအားဖြင့်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာသာသေးငယ်တဲ့ပြင်ပအင်တာဖေ့စကွဲပြားမှုသည်အန်းဒရွိုက်နှင့်အတူအထက်ဖော်ပြထားတဲ့ကိစ္စများတွင်ကဲ့သို့တူညီသောလမ်း၌ပြစ်မှားမိသည်။ ဤအရာအလုံးစုံလုပ်ရပ်များအပြင်ကျနော်တို့ပြီးသားအဘယ်သူကိုအတူသီးခြားဆောငျးပါးတှငျဆှေးနှေးနှင့်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါပြီ။
Read more: iPhone အတွက် Instagram ကိုမှဓာတ်ပုံ post လုပ်နည်း
ဒါဟာ iPhone အတွက် Instagram ကိုအတွက်, သငျသညျတစ်ခုတည်းဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုသာထုတ်ဝေနိုင်မထင်ရှားပါသည်။ ပလက်ဖောင်းများနှင့်လက်လှမ်း function ကို၏ "ပန်းသီး" ၏အသုံးပြုသူများ "Carousel"ဘယ်တစ်ဆယ်ဓာတ်ပုံများအထိပါဝင်တဲ့ပို့စ်များကိုလုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြီးသားကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးတဦးတည်းအတွက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ။
Read more: ဘယ်လို Instagram ကိုတစ်ဦး "Carousel" ကိုဖန်တီးရန်
ဓါတ်ပုံများ၏ထုတ်ဝေရန် - - သင်ရုံက၎င်း၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာ၏လုပျငနျးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်, Instagram ကိုသင်ယူဖို့စတင်နေကြသည်ရင်တောင်သင်တို့သည်ငါတို့၏အဆိုပြုထားညွှန်ကြားချက်၏အားသာချက်ယူအထူးသဖြင့်လျှင်, အခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကျနော်တို့ကဒီပစ္စည်းကိုသင်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Friki-Retrogamer especial "Retromadrid 2017". #FRG #Frikiretrogamer #jandrolion (စက်တင်ဘာလ 2019).